Chọrọ ka ndị ọkacha mara YouTube were nyocha ọwa gị nke ọma?
EE, Achọrọ m ka ndị ọkachamara YouTube nyochaa ọwa m
Malite na $ 120
Malite na $ 30
Malite na $ 25
10th nke February 2022
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ọdịnaya YouTube na-emikpu, ị nọ kpọmkwem ebe ịchọrọ ịnọ. Na post a, anyị ga-akpọga gị n'ụdị vidiyo imikpu asaa dị iche iche ị nwere ike ịmepụta ka ị were…
YouTube bụ otu n'ime netwọkụ mgbasa ozi ọha kachasị ewu ewu yana ikpo okwu na-eduga maka nkwanye vidiyo n'ụwa niile. N'ihe dị ka ijeri 2.29 ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike kwa ọnwa, YouTube bụ usoro mgbasa ozi mmekọrịta ọha na eze nke abụọ ama ama mgbe…
Ntuziaka gị maka ịmepụta usoro nbipute ntụkwasị obi na YouTube iji welie ndị na-ekiri ya
Enwere ọtụtụ akụkọ na blọọgụ na-adụ ọdụ ndị na-emepụta ọdịnaya YouTube ka ha bipute vidiyo mgbe niile site na ịrapagidesi ike na nhazi nhazi. Agbanyeghị, enweghị ọtụtụ ozi gbasara otu onye nrụpụta ọdịnaya nwere ike isi mepụta ikesa…
Otu esi enweta ọtụtụ Hashtags iji kwalite ọdịnaya YouTube gị
Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na a ga-etinye usoro nyocha ọchụchọ naanị na ibe weebụ. Otú ọ dị, nke ahụ dị anya site n'eziokwu, dị ka search engine njikarịcha usoro nwere ike n'ọrụ na ọ bụla n'elu ikpo okwu. Ihe hashtags…
Atụmatụ YouTube dị oke mkpa maka ọganihụ ọwa gị
Kemgbe mmalite ya na 2005, YouTube abụrụla usoro mgbasa ozi kachasị eji eme vidiyo na ịntanetị. Dịka nke 2020, enwere ihe ruru ijeri mmadụ 2.1 n'ụwa niile na-eji YouTube. Ihe malitere dị ka…
Ihe ị ga-atụle mgbe ị na-amalite ọwa YouTube maka mmalite gị
Ọ bụ eziokwu ama ama na YouTube bụ otu n'ime ikpo okwu a na-ejikarị eme ihe maka nkwanye vidiyo. Ikpo okwu na-eto ngwa ngwa n'ime afọ ole na ole gara aga. Na 2017, YouTube nwere…
Otu esi edozi okwu na-ezighi ezi na YouTube?
N'agbanyeghị mbọ ị na-etinye n'ime imepụta vidiyo gị, a ga-enwe ọtụtụ mmadụ, ewezuga ndị debanyere aha gị na-eguzosi ike n'ihe, ndị na-agaghị amasị ọrụ gị. Ị nweghị ike ịtụ anya nkwupụta dị mma sitere na…
Otu esi eme vidiyo gụnyere maka ndị debanyere aha YouTube LGBTQIA gị
YouTube bụ ikpo okwu a na-ejikarị eme ihe n'ụwa niile, nke na-eme ka ọ dị ike nke ukwuu maka izisa ozi dị mkpa. Vidiyo ndị dị na YouTube nwere ikike ịkpụzi omenala na imetụta ọha na eze…